वर्षामा देखिने रोगहरू - स्वास्थ्य - साप्ताहिक
- डा. सुरभी अर्याल
वर्षा याममा असावधानीवस दूषित खानेपानी प्रयोग हुँदा बालबालिकालाई झाडाबान्ताले सताउँछ । यस्तो समस्याबाट जोगिन पानीलाई उमालेर मात्र पिउनुपर्छ ।
फोहोर पानीका कारण हैजा लाग्छ । यस्ता बिरामीको दिसा पातलो तथा सेतो हुन्छ भने बिमारी शिशु छिट्टै सिकिस्त हुन्छ । खाना खानुअघि र दिसा गरेपछि राम्रोसँग हात धुनुपर्छ ।
लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने यो रोग वर्षा यामका बेला ठाउँ–ठाउँमा जमेको पानीका कारण देखा पर्छ । यसबाट जोगिन पानी जमेका खाल्डाखुल्डी पुरिदिनुका साथै घर वरपर सफा राख्नुपर्छ । बालबालिकालाई पुरै बाहुला भएको पहिरन लगाइदिनुपर्छ भने लामखुट्टेबाट जोगिने उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
टाइफाइड तथा जन्डिस (हेपाटाइटिस ए, ई)
यी रोग पनि दूषित पानीका कारण हुने रोग हुन् । त्यसैले पानी उमालेर मात्र पिउनुपर्छ । खुला ठाउँमा बेच्न राखिएका खानेकुरा खानु हुँदैन । टाइफाइड तथा हेपाटाइटिस एको भ्याक्सिन लगाउनु पर्छ । यी रोग बढी मात्रामा तीन वर्ष माथिका बालबालिकामा देखा पर्छन्, त्यसैले यो मौसममा उक्त उमेरका बालबालिकाको स्याहार बढी गर्नुपर्छ ।
लामो समयसम्म शरीर भिज्यो भने फंगल इन्फेक्सन (दाद) हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले भिज्नासाथ शरीर पुछेर सुख्खा बनाउनुपर्छ ।
यो रोग माइट भन्ने कीराको टोकाइबाट सर्छ । यो रोग लाग्दा ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, शरीरमा रातो एलर्जी जस्तो दाग आउने आदि हुन्छ । यसबाट जोगिन पूरा बाहुला भएका पहिरन लगाउनुपर्छ भने जंगल तथा झाडी भएका ठाउँमा जानु हुँदैन ।
भाइरल ज्वरो, रुघाखोकी, दम जस्ता भाइरल ज्वरो पानी पर्ने मौसममा बढी देखा पर्छन् । यस्तो बेला फलफूल तथा तरकारी बढी मात्रामा ख्वाउनुपर्छ भने झोल कुरा पनि उत्तिकै ख्वाउनुपर्छ । पानी उमालेर मात्र पिउनुपर्छ । बाटोमा खुला राखिएका खानेकुरा तथा आइसक्रिम खान दिनु हुँदैन । राम्रोसँग हात धोएर मात्र खानेकुरा ख्वाउनुपर्छ ।
प्रकाशित :श्रावण १३, २०७६
देखिने छैनन् नाभेद
बेकह्यामजस्तै देखिने रहर
अब देखिने छ यस्तो प्रविधि
फरक देखिने लहड
जाडो महिनामा देखिने प्रमुख रोग
वर्षामा वाटरप्रुफ ग्याजेट
गर्भावस्थाका सावधानी पुस २२, २०७६
मोटोपन कम कसरी कम गर्ने ? पुस २१, २०७६
मुटु रोगी, जाडो र जोखिम कम गर्ने उपाय पुस १५, २०७६
खाली पेटको चियाले स्वास्थ्यमा गर्छ हानी नै हानी मंसिर २६, २०७६
यौन जीवनको लागि असल खानेकुरा मंसिर २४, २०७६
बदाम खानुका फाइदा मंसिर २२, २०७६
कुर्सीमै सूर्य नमस्कार मंसिर २१, २०७६
व्यायाम अनि जाडो मौसम मंसिर १७, २०७६
तपाईंका केहि बानी, जसले गर्न सक्छ मृगौलालाई हानी मंसिर १७, २०७६
गर्भावस्थाका सावधानी मंसिर १२, २०७६